Migadra ilay Iraniana mpanao sariitatra nanoritsoritra ny alahelo tao Parisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2015 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, عربي, Français, English
Hadi Heidari, mpanao sariitatra nampidirina am-ponja tamin'ny 16 Novambra 2015. Sarin'i Heidari hita Facebook.
Misy Voatra amin'ity tsanganana ity nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ary navoaka eto indray noho ny fiarahamiasa amin'ny Fanentanana Iraisampirenena handalàna ny Zon'Olombelona ao Iran.
Nosamborin'ny herim-piarovana tao amin'ny toeram-piasany ao amin'ny biraon'ny gazety Shahrvand tao Tehran tamin'ny 16 Novambra lasa teo ilay iraniana mpanao sariitatra malaza antsoina hoe Hadi Heidari. Nanamarina ny fisian'ny fisamborana ny roa amin'ny mpiara-miasa amin'i Heidari tao amin'ny gazety mivoaka isan'andro ao Tehran ary niteny tamin'ny Fanentanana Iraisampirenena ho Fandalàna ny Zon'Olombelona ao Iran fa “tonga niaraka tamin'ny didy fampisamborana ny zatovolahy iray. Nasehony an'i Hadi ilay didy fampisamborana ary dia nalainy am-pahanginana izy.”
Niteny tamin'ny Fanentanana ny loharanom-baovao fa tsy fantatry ry zareo loatra izay fandaminana nisambotra an'i Heidari, fa nampiany hoe mety ho ny Fikambanan'ny Fitsikilovan'ny Mpiambina Revolisionera no nisambotra azy, sampan-draharaha mitam-piadiana matanjaka tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny rafitra islamika ao amin'ny firenena izy io. Ny sariitatra farany nataon'i Heidari dia mifandraika amin'ny fanafihana tao Paris tamin'ny 13 novambra, izay nahafatesan'olona 130.
Nampihetsi-po ny sariitatr'i Hadi Heidari ‘Nitomany i Frantsa’ taorian'ny fanafihana an'i Parisy tamin'ny 13 Novambra. Sary avy amin'ny kaonty Instagram an'i Heidari.
Hadi Heidari, 38 taona, nahazo diploma avy amin'ny Oniversiten'ny Zavakanto sy ny Maritrano ao Tehran teo amin'ny sehatry ny fandokoana. Tao anatin'ny 20 taona farany no niasany tamn'ireo famoaham-boky aman-gazety reformista isankarazany ao Iran, ka anisan'izany ny Etemad, Bahar, Pool, Norooz, Neshat, Asr-e Azadegan, ary ny Eghbal, ankoatra ny tsy voatonona.
Efa nosamborina i Heidari tamin'ny 2009 taorian'ny fifidianana filoham-pirenena nifandroritana iny ka nampangaina tamin'ny “fivoriana sy fandonana ny fiarovam-pirenena,” ary nandany famonjana 17 andro mialoha ny famotsorana. Nosamborina indray izy tamin'ny Desambra 2010 tamin'ny fiampangana ho “manao propagandy miady amin'ny fanjakana,” ary navotsotra roa volana taty aoriana rehefa nandoa onitra saram-pamotsorana 15.000 dolara amerikana.
Tamin'ny Septambra 2012, nisy sariitatra nampitondrain'i Heidari ny lohateny hoe “Ireo Lehilahy Notampena-maso” nomena ny gazety Shargh lasa nifandiran-kevitra tokoa. Taorian'ny famoahana sy ny ezaka nifarimbonana nataon'ny mpikambana ao amin'ny parlemanta, manampahefanam-panjakana, mpitondra fivavahana 15O, dia voarara ny Shargh tamin'ny 26 Septambra 2012, andro iray taorian'ny nivoahan'ny sary, ary nampanantsoina ho eny amin'ny Fitsarana i Heidari. Nafindra ho ao amin'ilay Fonjan'i Evin, manana ny lazany i Mehdi Rahmanian, mpitantana ny gazety sady mpitazona ny lisansa.
Nilaza ireo manampahefana nanan-kambara tamin'ilay sariitatra fa opa natao tamin'ireo menavazan'ny ady nifanaovan'i Iran sy i Iràka ilay sariitatra, saingy maro no mihevitra fa fiala-tsiny tsotra io entina handrarana ilay gazety reformista namoahana azy. Noafahana madiodio tamin'ny fiampangana na ny gazety na i Heidari tamin'ny 29 desambra 2012, ary niverina nivoaka indray ny Shargh.
Sary nataon'ilay mpanao sariitatra Touka Neyastani tamin'ilay mitovy asa aminy nogadraina nomena ho an'ny ICHRI.
Nandritra ny herinandro vitsivitsy izao dia maro ny mpanao gazety Iraniana no nosamborin'ny Sampam-pitsikilovan'ny Mpiambina Revolisionera, tamin'ny fivadihana tsikelikely ho famoretana mihamafy ataon'ny madi-doha. Ehsan Mazandarani, talen'ny fanatanterahan'ny gazety Farhikhtegan, Afarin Chitsaz, mpanao matoandahatsoratra ho an'ny gazety ao Iran, Saman Safarzaei, tonia iraisampirenen'ny famoaham-boky aman-gazety Andisheh Pouya, ary i Issa Saharkhiz, mpikatroka ara-politika sady mpanao gazety, no sasantsasany amin'ireo vao nofonjaina ary nohamafisin'ny Mpiambina Revolisionera ny fisamborana azy ireo.